Apple ichafanirwa kubhadhara 24.9M yekukanganisa Siri patent | IPhone nhau
Mushure menguva pfupi iyo yaive Arufabheti, Apple yaive zvakare kambani yakakosha kwazvo pasirese. Izvi zvinongogoneka chete kana kambani iri kuita fambiro mberi yakatsiga, kunyangwe kana zvichireva kushanda kusvika pamuganhu wepamutemo. Ndinotaura izvi nekuti, kunyangwe ini ndisingakwanise kutaura kuti ndinozvibvuma, iyo kambani iyo Tim Cook inomhanya inogona (uye ndinofunga inofanirwa) dzimwe nguva inotamba yakasviba, sezvavakaita negonzo kana kushandisa matekinoroji aive ane kodzero. Siri chinhu chakakosha cheOS asi, sekufunga kwedare, Apple yakatyora akawanda patent Mukusimudzira kwayo.
Sezvakataurwa neMarathon Patent Group, iyo inodzora Dynamic Kufambira mberi, iyo kambani inogamuchira 5 mamirioni emadhora achangoburitsa nyaya yakanangana naApple, nyaya iri izvozvi muDare reDunhu reNorth District yeNew York. Kune rimwe divi, iyo Cupertino kambani ichafanirwa kubhadhara mumwe mamiriyoni 19.9 mushure mekunge mamwe mamiriro asangana. Kune iro chikamu, Apple ichagamuchira rezenisi repatent, iyo yaizoibvumidza kuti irambe ichishandisa Siri sekunge pasina chakaitika.
Apple ichakwanisa kuenderera ichishandisa Siri
Dynamic Kufambira mberi yakaratidza kuti inenge hafu yemari yayo yakawanda ingangoenda kuRenssealer Polytechnic Institute muNew York State. Iyo patent "Kushandiswa kwechimiro chechimiro chemutauro uchishandisa duramazwi repakati remhedzisiro" yakatanga kugadzirwa namuzvinafundo weDPI, asi yakapihwa marezenisi chete kuDynamic Advances.
La mhosva yakaitwa muna Gumiguru 2012, chingori gore mushure mekuratidzwa kwaSiri, mubatsiri chaiye akauya kuIOS neiyo iPhone 4S. Kugadziriswa kweDynamic Advanced zvakare kunovimbisa Apple kuti havazokwanise kumuendesa kudare zvakare kweanenge makore matatu. Chii chichaitika mushure memakore matatu iwayo? Zvakanaka, pane zvingangoitika zvitatu chete: hapana, chimwe chinhu chisingaite nekuti makambani ese anoda kuita purofiti, iyo Apple inofanirwa kubhadhara zvekare kuti irambe ichishandisa patent kana kuti inoshandura Siri zvakakwana kuti isashandise. Kuti tizive zvichaitika tinofanirwa kumirira ingangoita mwedzi makumi matatu nematanhatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Apple ichafanirwa kubhadhara 24.9M yekukanganisa Siri patent
Iyo App Store inowana zvakapetwa kaviri mari yeiyo Play Store kunyangwe ichitora mashoma kurodha pasi